Sida loogu daro Xubin Mushahar Leh Boggaaga WordPress | Martech Zone
Jimco, Diisambar 6, 2013 Monday, June 8, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah su'aalaha aan sida joogtada ah u helo ayaa ah in aan ka war qabo iyo in kale ka mid noqoshada xubinnimada wanaagsan ee WordPress. WishList waa xirmo dhameystiran oo u rogeysa boggaaga WordPress goob xubin buuxda u shaqeyneysa. In ka badan 40,000 boggag WordPress ah ayaa horeyba u shaqeynaya softiweerkan, sidaas darteed waa la caddeeyay, ammaan yahay oo la taageeray!
WishList Astaamaha Goobta Xubinnimada Ku dar
Heerarka Xubinnimada Aan Xaddidnayn - Abuur Silver, Gold, Platinum, ama heerar kale oo kasta oo aad rabto! Lacag dheeraad ah ka qaado heerarka sare ee helitaanka - dhammaantood isla bartaas.
WordPress Isku dhafan - Haddii aad dhiseysid degel cusub ama aad kudareyso barta WordPress ee hadda jirta, rakibidda WishList waxay u baahan tahay oo keliya inaad furtid faylka, soo rarto, iyo inaad dhaqaajiso qalabka wax lagu duubo!
Ikhtiyaarrada Xubinnimada Fudud - Abuur heerarka xubinnimada Bilaashka ah, Tijaabada, ama Lacagta - ama isku darka saddexda.
Maareynta Xubinta fudud - Arag xubnahaaga, heerka diiwaangelintooda, heerka xubinnimadooda, iyo waxyaabo kaloo badan. Si fudud u cusbooneysii xubnaha, ugu wareeji heerar kala duwan, hakad geli xubinnimadooda, ama gebi ahaanba tirtir.
Gaarsiinta Mawduuc isku xigxiga - Ka qalin jabiya xubnahaaga hal heer ilaa heerka xiga. Tusaale ahaan, 30 maalmood kadib, waxaad si otomaatig ah u cusbooneysiin kartaa xubinta Tijaabada Bilaashka ah Silver heerka.
Xakamee Mawduuca La Daawaday - Kaliya dhagsii badhanka "Qari" si aad u ilaaliso waxyaabaha gaarka u ah xubnaha heer gaar ah. Abuur xubinimo "qaybsan" kana qari waxyaabaha ka soo baxa heerarka kale.
Isdhexgalka Gawaarida Dukaameysiga - Si habsami leh ayuu ula midoobaa nidaamyada gawaarida dukaamaysiga ee ugu caansan, oo ay ku jiraan ClickBank, iyo kuwo kaloo badan.
Helitaanka Heerarka Badan - Xubnahaaga u oggolow helitaanka heerar kala duwan xubinnimadaada. Tusaale ahaan, samee goob soo degsiin dhexe ah oo marin loo siiyo xubnaha heerarka oo dhan.
Isticmaal xiriiriyeheena xiriirka iyo
Bilow Tijaabadaada Bilaashka Ah Maanta!
Tags: BarcaWordPressxubin wordpresswordpress plugin xubin
Iibi, Adeeg iyo Suuq leh Istaraatiijiyada1